Homo Loves: A Game of Poker
စည်သူနှင့် ကျွန်တော်က ကျောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ပရ၀ဏ်တစ်ခုတည်းမှာ အတူတူတက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့။ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းထဲ အတူတူငှားနေဖြစ်တာလည်း (၆)လလောက်ရှိပါပြီ။ အရင်တုန်းကတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိကြပါဘူး။ အခန်းငှား နေတာ ကျောင်းသားတွေအတွက် မထူးတဲ့ကိစ္စလို့ ပြောရင်ရပေမယ့် နေရာအကွက်အကွင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာ ငှားနေဖို့ကျတော့ တစ်ယောက်တည်းဆို မတတ်နိုင်တာကြောင့် အတူငှားနေဖို့ အခန်းဖော်လိုချင်ကြောင်း သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာ စည်သူနှင့် တွေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ အိမ်ကခွဲခွာပြီး ကျောင်းလာတက်ရတဲ့ ပထမနှစ်ကာလဟာ ယောက်ျားလေးတွေအတွက် အတော် သာယာတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ ချွင်းချက်အနေနဲ့ပြောရရင် ငွေကြေးပြဿနာပဲရှိတတ်တယ်။ တခြားကိစ္စတွေကတော့ တက်ကြွတဲ့ လူငယ် တွေဆိုတော့လည်း သတိမမူမိပါဘူးလေ။ တိုက်ခန်းမှာ အခန်းဖွဲ့ထားတာက များတော့ မဆိုးပါဘူး လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်။ မသကာ ကိုယ့်ရည်းစားကောင်မလေးတွေ ခေါ်လာလည်း အဆင်ပြေမှာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ့်အဆင့်အတန်းနှင့်ကိုယ် မသောင်းကြမ်းကြပါဘူး။ (၁၉)နှစ်အရွယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ အားကစားသမားတွေလို ကျစ်လစ်သွယ် လျပါတယ်။ အားကစား လှုပ်ရှားရတဲ့အချိန်တိုင်း ကျောင်းမှာအမြဲလိုတက်ကြွနေကြသူများဆိုတော့ ကောင်းသင်ခန်းစာတွေလေ့လာရာမှာ ထုံထိုင်းမှုန်မှိုင်းနေတာမျိုး မဖြစ်ကြပါဘူး။
ငွေကြပ်တဲ့ တစ်ခုသော ညနေခင်းမှာ စာလည်းမလုပ်ချင်၊ TV လည်းမကြည့်၊ ပြီးတော့ ယောက်ျားလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာတွေလည်း မဖန်တီးချင်ကြဘူး ဖြစ်နေရော။ ဟိုသည်လျှောက်ပြော၊ ဘာလုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲ ပြောကြရင်း စည်သူက အကြံပြုတယ် ပိုကာ ကစားရ အောင်တဲ့။ ပိုက်ဆံမရှိ ခမ်းနေတဲ့အချိန် ပိုကာ ကစားတာ ပိုပျင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ စည်သူက သုံးလေး မိနစ်လောက် ငြိမ်သက်ကာ စဉ်းစားပြီး 'အင်း....ဂေါက်တဲ့အတွေးတော့မဟုတ်ဘူးကွ....နည်းနည်းဆန်းတဲ့ ကစားနည်းတော့ရှိတယ်' တဲ့ ပြောတယ်။
'အို...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ ငါတို့ ဘယ်လိုကစားမလဲ ဒါဆို' ကျွန်တော်က အလောတကြီးပြောလိုက်မိပါရဲ့။
'ငါတို့ အ၀တ်ချွတ်ကြေးလေ...အပျော်ပေါ့' စည်သူ အဲဒီစကားကိုပြောပြီး ကျွန်တော့်တုန့်ပြန်မှုကို စောင့်တယ်။
'မင်းဆိုလိုတာက Strip-poker ။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာကောင်မလေးတွေမှ မရှိတာပဲ'
'ဘယ်မှာလဲ ပျော်စရာ အဲလိုကစားရင်'
'ဟာကွာ အကြံဥာဏ်တစ်ခုအဖြစ်ပေးကြည့်တာပါ' စည်သူက ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြန်ပြောရော။
'မင်း မလုပ်ချင်လဲ မကစားနှင့်ပေါ့ကွာ။ ဒါဆို ငါတော့ကျောင်းစာတွေ Revision သွားလုပ်တော့မယ်'
'အာ....အိုကေ၊ ရှုံးရင် အ၀တ်အကုန်ချွတ်ရမှာနော် ပြီးမှ မငြင်းနဲကဗျ' ကျွန်တော် တုန့်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ နောက်မို့ဆို ပျင်းစရာပိုကောင်းနေတော့မှာလေ။
ကစားပွဲက စတင်ပြီး ကစားတော့ မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ထက် စည်သူက ရှုံးပွဲများနေရော။ အ၀တ်တွေလည်း ချွတ်ရင်း သူ့ကိုယ်ပေါ် မှာ အနက်ရောင်အတွင်းခံဘောင်းဘီပါးလေးပဲရှိတော့တာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့် တီရှပ်ဝတ်ထားဆဲ ခပ်မိန့်မိန့်ကြီးပေါ့ အခုထိ။ နောက်တစ်ပွဲ ဆက်ကစားတော့ ရှုံးပြန်ပြီ...သူ။
'ချွတ်ပါ....ချွတ်...ချွတ်' ကျွန်တော်နိုင်တာဆိုတော့ ၀မ်းသာအားရအော်မိ တောင်းဆိုမိပါတယ်။
စည်သူ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးလိုက်တယ်ဗျ။ ပြီးတော့မှ သူ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲခွာတယ်။ တင်းကားပြီး ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေက အိကနဲပေါ်လာရော။ ဘောင်းဘီကို ကုန်းပြီးလျောချွတ်ကာ ခြေချင်းဝတ်ကနေ ဖယ်နေတာဆိုတော့ အ၀တ်မကပ်တဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားက လမ်းသွယ်လေးရယ် ကုန်းလိုက်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့ ခရေ၀ ပန်းသွေး ရောင်လေးရယ်ကို မြင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ စည်သူက ကျွန်တော့်ဘက်ကို ခပ်ဖြေးဖြေးလှည့် ကာမျက်နှာချင်းဆိုင်တော့ ၇လက်မနီးပါး ရှည်တဲ့ မာတောင့်နေသော သူ့ငပဲကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ကိုင်ထားတာက မလုံမခြုံ။
'မလုံပါဘူးကွာ...' ကျွန်တော့် အသံတုန်တုန်ဖြင့်ပြောမိတယ်။
'မင်းပစ္စည်းကို ငါအကုန်မြင်နိုင်နေတာပဲ။ အကောင်းဆုံးကတော့ မင်းလက်တွေကို ဖယ်ပြီး ငါကောင်းကောင်းကြည့်ရအောင် ပြစမ်းပါကွာ'
'Wow! လှတယ်ကွ။ မင်းဘော်ဒီကလည်းမဆိုဘူး ပစ္စည်းကလည်း ရှယ်ပဲ' ဟုတ်တယ်ဗျ ယောက်ျားချင်းအားကျစရာ ပစ္စည်းပိုင်ရှင်ပဲလေ သူ့ ဟာက။
စည်သူက ရှက်ရှက်နှင့် ထိုင်ချလိုက်ပြီးနောက် 'ပျော်တော့ပျော်စရာလုပ်တာပဲ ဒါပေမဲ့ ငါတို့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ အခု' 'ဒီမှာ စော် ခပ်ကဲကဲတွေမရှိတာ နာတာပဲနော်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ငါ့စိတ်တွေ အရမ်းလာနေပြီ။ အခန်းထဲသွားပြီး ထုရင်ထု ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာထိုင်နေလို့ကတော့ မမျှော်လင့်တဲ့ တစ်ခုခုတော့ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗျ'
ကျွန်တော့် ပါးစပ်က ရုတ်တရက်ထွက်သွားတယ်။ 'ငါ အကြံတစ်ခုရပြီ' လေထဲမှာ အနံ့တစ်ခုခုရသလို ရှူရှိုက်ရင်းပြောလိုက်မိတာပါ။ 'မင်းက တုတ်ပြ ခဲပြနှင့်ဆိုတော့ကာ.......အား..နောက်တစ်ကြိမ် မင်းရှုံးရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ငါပြောမယ်ကွာ။ အဲဒါက ငါတို့ ဘာဆက်လုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့'
'အဲဒါ...အဲဒါက ဒုက္ခရောက်အောင်တော့ မလုပ်ပါဘူးနော် ငါ့ကို' စည်သူက ကြောက်ရွံ့ဟန်ဆောင်နေရင်း ပြောပါတယ်။ 'ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ပိုရယ်ရမယ်လို့ ငါထင်တာပဲ'
ကျွန်တော်တို့ ပိုကာကို ဆက်ကစားတော့ ကျွန်တော်က နှစ်ပွဲလောက်ရှုံးလိုက် စသည်သူက ရှုံးလိုက်နဲ့။ နောက်ဆုံး စည်သူက တတိယအကြိမ်ရှုံးတော့ ကစားပွဲကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ 'ကောင်းပြီ...ကောင်းသွားပြီ' ကျွန်တော်ရယ်မောမိပါရဲ့။ 'ငါတော့ ဘာလုပ် ခိုင်းရင်ကောင်းမလဲ...အင်း...'
ကျွန်တော် ခဏတော့ တွေးတောကြံဆရင်း မတ်တပ်ရပ်ကာ လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းပေါ်တင်ထားလိုက်ဖို့ စည်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်။ စည်သူ ခဏတော့ ငြိမ်နေပြီးမှ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဖြည်းဖြည်းလေး ထရပ်မိကာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီ၊ ဖောင်းကား ပြည့်တင်းနေတဲ့ တင်သားဆိုင်တွေ၊ မာတောင့်ပြီး ပန်းသွေးရောင်ထနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အမဲဈေးက အသားတန်းမှာ လတ် မလတ်စစ်ဆေးကြည့်နေသလိုမျိုးကြည့်မိရတာပါပဲ။ စည်သူ့ငပဲက မိုးပေါ်ထောင်နေတာများ တစ်မိနစ်ထက်တစ်မိနစ် ပိုပိုကြီးလာသလို ထင်ရတယ်။ ကျွန်တော့်အကြည့်တွေက တစ်ဆင့် တစ်ကိုယ်လုံးရှိ သွေးတွေ ဆူပွက်လာသလို ခံစားရပြီးနောက်မှာတော့ ခပ်ပါးပါး အဖြူ ရောင် brief ဘောင်းဘီတိုထဲက ကျွန်တော့်ညီဘွားသည်လည်းမထိန်းနိုင် မသိမ်းနိုင်ထကြွလာရပါရော။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်း နိုင်လိုက်သေးခင်မှာပဲ မာတင်းပြီး အစွမ်းကုန်ထောင်နေတဲ့ စည်သူ့ငပဲကို အရင်းကနေဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါတယ်။ ပူနွေးပြီး နုညံ့တဲ့အထိ တွေ့ကိုလည်း လက်ဖျားတွေကတစ်ဆင့် ခံစားရပါရဲ့။ စည်သူ့ မျက်လုံးတွေဟာ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်သွားပြီး ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့် နေပေမဲ့ အမိန့်အတိုင်း ခပ်မတ်မတ်ရပ်ကာ သူ့ပါးစပ်တွေကို တင်းတင်းစေ့ထားပါတယ်။ သူ့အသက်ရှူသံတွေကတော့ ကျယ်လောင် လာသလိုပဲဗျာ။ ကျွန်တော် ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဒူးထောင်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သံခမောက်လေးလို ပြောင်တင်းနေတဲ့ စည်သူ့ရဲ့ငပဲခေါင်းကို သုံးလေးချက်လောက်ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ စည်သူ့ အသက်ရှူနှုန်း မြန်လာပြီး climax ဖြစ်လာတယ် ထင်မိတဲ့ ခဏမှာ တော့ သူ့ငပဲကို ပါးစပ်ထဲကထုတ်ကာ ခဏနေကထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာပေါ်ပြန်သွားထိုင်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်။ ပါးချိုင့်ပေါ်အောင် ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို လျှာနဲ့တစ်ချက်သပ်လိုက်ရင်း 'နောက်တစ်ပွဲလောက် ကစားရအောင်၊ ငါတို့ဘာဆက်လုပ်နိုင် မလဲ ကြည့်ကြတာပေါ'့ လို့ပြောလိုက်တယ်။
စည်သူလည်း ခဏနေက သူထိုင်နေတဲ့နေရာမှာပြန်ထိုင်ပြီး ကစားပွဲသစ်ကို စတင်လိုက်ကြပါတယ်။ 'ဟား...ဟား' စည်သူတစ်ယောက် ထရယ်လိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်းလိုက်ရယ်မိတာပေါ့နော်။ မာတောင်နေတဲ့ ငပဲပိုင်ရှင် အ၀တ်မပါတဲ့ စည်သူဟာ ကျွန်တော့်ဆီလှမ်း လျှောက်လာပြီး လက်ကမ်းပေးပါတယ် မတ်တပ်ရပ်ဖို့လေ။ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့် ထရပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ စည်သူက သူ့လက် မောင်းကြီးတွေနှင့် ဆွဲဖက်ရော။ ကျွန်တော်သည်လည်း ပြန်လည်ဖက်တွယ်မိချိန်မှာတော့ နှစ်ဦးသားရဲ့ ကိုယ်ပူငွေ့လေးတွေဟာ ပိုမို ပူနွေးလာကြပြီးသကာလ စကားပြောဖို့ မေ့နေကြပါတယ်။
စည်သူရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်ကနေ လျောကျပြီး ကျွန်တော့်နောက်ကျောပြင်ကတစ်ဆင့် ချောမွေ့ပြီးတင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့် တင်သားဆိုင်တွေပေါ်က ဘောင်းဘီပါးကို ကြမ်းပြင်ရောက်အောင် လျောချွတ်စေပါတော့တယ်။ နှစ်ဦးသားရဲ့ လက်တွေ၊ နှုတ်ခမ်းသား တွေဟာ နေရာအနှံ့ မုန်တိုင်းထန်မိကြပါပြီ။ မာတောင့်ပြီး မတ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ငပဲတွေဟာလည်း ဟိုတိုးသည်ထိုး လျှို့ဝှက်အပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပွတ်သပ်မိရော။
ရပ်လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်.....နှစ်ဦးသား မုန်တိုင်းထန်နေတာကို ရပ်လိုက်ပြီး အသက်ဝအောင် အငမ်းမရရှုမိကြပါတယ်။ တစ်ယောက် မျက်နှာ တစ်ယောက်စိုက်ကြည့်ကြပြီး ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့သဘောစိုက်ကြည့်မိကြတယ်ဆိုရမယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် နာကျင်မှုကိုတော့ ဘယ်သူမှ မခံစားလိုကြပါဘူး။ တစ်ယောက်ဘေး တစ်ယောက် ထိုင်ချမိတာ ခဏတော့ကြာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက်ကိုင်ကာ ကစားတယ်၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေ၊ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ပွတ်သပ်တယ်။ လက်နှင့်ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်လို့ မှီသမျှ ညင်သာစွာလုပ်ဆောင်ကြတာ ကန့်သတ်ချက်တွေ ဘေးဖယ်ပြီးနောက်။
'အင်း...ငါတို့အခုဘာလုပ်ကြမလဲ' ကျွန်တော် တုန်ယင်တဲ့အသံနှင့် မေးမိပါတယ်။ 'ငါမရပ်ချင်တော့ဘူးနော် အခု'
'ငါလည်းမရပ်ချင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့ အိုင်ဒီယာ တစ်ခုရပြီ'
တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံနှင့် စည်သူကဆိုတယ်။ 'ငါတို့ နပန်းလုံးကြမယ်လေ၊ တစ်ယောက် ချုပ်တာကို နိုင်အောင်ဖြေနိုင် ရုန်းနိုင်ရုံပါ။ ကစားပွဲရဲ့ အဖြေကတော့ နိုင်တဲ့သူကိုပြီးအောင် -ွင်းထုပေးရမယ်။ ပြီးတော့ ရှုံးတဲ့သူရဲ့ -င်ထဲကို နိုင်တဲ့သူက -ိုးခွင့်ကို ထပ်ဆင့်ဆုအဖြစ် ရမယ်။ ဘယ်လိုလဲ အသင့်ဖြစ်ပြီလား?'
ကျွန်တော် နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားရပြီပေါ့နော်။ နောက်မှ အပြုံးတစ်ချက်နှင့်အတူ သူ့ဆောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
'ခပ်ပြင်းပြင်း ဆန္ဒတစ်ခု အခုထိမင်းမှာမရှိသေးဘူးလား' ကျွန်တော် သူ့ကိုမသိမသာမေးလိုက်တယ်။ 'ဟဲဟဲ....မင်း-င်ဝသေးသေးလေးကို ချောဆီကောင်းကောင်းဆွတ်ထားဖို့လိုက်ပြီနော်' ကစားပွဲရဲ့ရလဒ်အရဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော် ကြိုတင်မမျှော်လင့် ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ စည်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ ဒီလိုညနေခင်းရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုလေးဖြစ်လာဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်များစွာကပင် လျှို့ ၀ှက်စွာမျှော်လင့်စီမံထားဟန်ပါ။ ပြီးတော့ သူဘာလိုချင်နေတယ်ဆိုတာကို သိသလို မကြာခင်ရဖို့မျှော်လင့်ဟန်လည်းပါမယ်ထင်တယ်။
အား...မှတ်မိပြီ။ ကျွန်တော် ဒီအခန်းကိုပြောင်းလာပြီး တစ်လလောက်အကြာ သူ အပြာကားတစ်ခွေယူလာခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုက ဆင်ဆာမပါသလို ယောက်ျားမိန်းမဆက်ဆံတဲ့အခန်းတွေပဲပါတာပါ။ anal sex ကိုအသားပေးပြတော့ ကျွန်တော့်မှာ လုပ်ကြည့်ချင်စိတ် တွေ ပြင်းပြပြီး ငပဲကမိုးပေါ်ထောင်မိသေးတာမှတ်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ကောင်မလေးနဲ့ ဂျိမ်းဖြစ်တော့ anal sex ကိုကြိုးစားကြည့်တာ သူမက ဘယ်တော့ မှမပေး ငြင်းဆန်တာ နှစ်ကုဋေကဋာပါပဲ။
စည်သူကတော့ ကျွန်တော်နှင့်ခြားနားစွာ စိတ်ကူးအိပ်မက်ကတစ်မျိုး။ သရုပ်ဆောင်မင်းသားတွေရဲ့ ပစ္စည်းထွားထွားတွေကို သဘော တကျလိုက်ကြည့်နေတတ်သလို နာကျင်မှုကြောင့် မျက်နှာရှုံ့မဲ့နေသော အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ခံစားမှုကို လိုက်ပါခံစားနေ သယောင် မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက်လို့ပါပဲ။ တစ်ခန်းပြီးလို့ နောက်တစ်ခန်းပြောင်းတော့ ငပဲရှည်ရှည် မင်းသားရဲ့ ပြုစုမှုကို မိန့်မူးနေတဲ့ ဗီဒီယိုထဲက အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်နေရာမှာ သူ့ကိုယ်သူ အစားထိုးခံစားနေသလားမသိ ပါးစပ်က တစ်ခါတလေ ရောင်ရမ်းပြီး ညည်းညူသံထွက်လာတတ်တယ်။ ကဲပါလေ....ပေးလာတဲ့ အခွင့်အရေးအပေါ် ကျွန်တော်က ဘာကြောင့်ငြင်းဆန်ရမှာလဲ မသိသလို ဆက်လျှောက်ကြည့်တာပေါ့။ ဗီဒီယိုအတူကြည့်တုန်းကလို စည်သူ့မျက်ဝန်းတွေက ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတာ ဗီဒီယိုထဲက မင်းသားကိုကြည့်နေတဲ့အတိုင်းဆိုတာ သတိထားမိရဲ့။ စည်သူ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ တကယ် ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ ရက်တစ်ရက်ဖြစ်မှာ ပေါ့ နော်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား အခန်းအလယ်က ပစ္စည်းတွေကို နည်းနည်းရွှေ့ပြီး နေရာလွတ်ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ပြိုင်ပွဲကိုစတင်လိုက်ကြတာပေါ့ ရယ်သံတွေ တလွင်လွင်ထွက်စေရင်းလေ။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဖျစ်ညှစ်ပွေ့ရမ်းရင်း ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျ အောင် အားစမ်းကြတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း အားရှိသမျှဖမ်းချုပ်ပြီး သူလဲကျအောင် လုပ်သလို သူကလည်းအစွမ်းကုန်ခုခံတယ်။ တစ်ကြိမ်တော့ သူက ကျွန်တော့်ကိုနောက်က ချုပ်သိုင်းထားတဲ့ အနေအထားဖြစ်သွားတော့ သူ့မျက်နှာက ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ်အပ်၊ မာတောင်နေတဲ့ငပဲဟာ သူချုပ်ထားလို့ နောက်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ လက်အစုံထဲ အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ရောက်ကရောလေ။
ကျွန်တော် စည်သူ့ငပဲကိုကိုင်ကာ ခပ်ဖြေးဖြေးကစားပေးလိုက် ရပါတယ် ရယ်ရယ်မောမောနှင့်ပါပဲ။ နှစ်ဦးသား တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ချုပ် ကိုင်ထားမိနေတဲ့ အနေအထားမှာ သူဟန်ချက်ပျက်အောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ခြင်းပါ။ သူ ခဏငြိမ်သွားတော့ ကျွန်တော့်လက်ကို ချုပ်ထားတာကို ရုန်း၊ သူ့ခြေထောက်ကို ကျွန်တော်ခြေတံတွေနှင့် ကလန့်လိုက်ပြီး လဲကျအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ စည်သူက သူ့ခြေထောက်တွေကို ဟန်ဆောင်ရုန်းရင်း မာထန်နေတဲ့သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေနှင့် ပွတ်သပ်ပါသတဲ့။
'ဟား..ရပြီ...မင်းမရုန်းနိုင်တော့ဘူး' ကျွန်တော်စည်သူ့ငပဲကိုဆွဲကိုင်ပြီး ဘာရယ်မဟုတ် ခက်သွက်သွက်လက်ကစားမိပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှု တွေက အလိုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ကျွန်တော်ဘာလုပ်မိမှန်း မသိတော့ပါဘူး။ စည်သူ ကျွန်တော်ချုပ်ကိုင်ထားတာကို ရုန်းဖြေဖို့ မကြိုး စားတော့ဘဲ သူ့တင်ပါးအစုံကိုအားပြု ကျွန်တော့်လက်သီးဆုပ်ထဲ သူ့ငပဲကို ပိုပိုဝင်အောင် အထုတ်အသွင်းလုပ်ဖို့စတင်ကြိုးစားပါတယ်။ ကျစ်လစ်ပြည့်တင်းနေတဲ့ သူ့တင်ပါးအစုံက ခပ်မြန်မြန်လှုပ်ရှားသလို သူ့နှုတ်ခမ်းကအော်သံကလည်း ကျယ်ကျယ်လာတယ်။ ရုတ်တရက် အော်သံတစ်ချက်နှင့်အတူ ဖိသွင်းမှုတစ်ချက် ကျွန်တော့်လက်သီးဆုပ်ထဲ ဖိသွင်းတယ်။ ကြည့်ရတာ ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ် ချင်တာကို ကျိတ်မှိတ်ထိန်းချုပ်ဟန်ပါပဲ။
'အိုး...Wow!' စည်သူ့နှုတ်ဖျားက အသံထွက်လာတယ်။ 'ဖီလင်ကမိုက်တယ်ဗျာ။ ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မခံစားဖူးဘူးရယ်။ ကျုပ်ရွှေဥတွေ ပေါက်ကွဲထွက်တော့မလား ထင်မိတာ။ အခု ကျုပ်ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိသွားပြီ ဘော်ဒါကြီးရေ။ ခဏလေးတော့ အသက်ရှူခွင့် ပေးဦး။ ပြီးရင်တော့ အားလုံးခင်ဗျားအတွက်ပါပဲလေ'
'ဒါဆို အမိုက်စားပေါ့ကွာ' ကျွန်တော် ရယ်ရယ်မောမော ပြန်ပြောဖြစ်တယ်။ 'အေးအေးဆေးဆေးလုပ်ပါကွာ၊ ငါက အရင်မလိုပါဘူး။ မင်း ငြိမ်းသွားရင်တော့ ငါတို့ အိပ်ခန်းထဲသွားကြရအောင်။ အ၀တ်ဘီရိုက မှန်ချပ်က အကြီးကြီးပဲလေ။ ခုတင်ဘေးမှာဆိုတော့ ငါတို့နှစ် ယောက် ခုတင်ပေါ်မှာဘာလုပ်လုပ် မြင်ရမှာကွ။ အမှန်ပြောရရင် ငါ့ငပဲကို မင်းဖင်ကြွက်သားတွေက ညှစ်ညှစ်ပေးတဲ့ခံစားမှုကို ကျင်းစိမ်ပြီး ခံစားကြည့်ချင်နေတာ။ အဲဒါတွေးမိလိုက်ရင် ငါ့ရင်ထဲ တဖြန်းဖြန်းပဲ ...ဟဲဟဲ'
စည်သူ ထိုင်ချထားရာကနေ ကျွန်တော်ခေါ်ဆောင်ရာ အိပ်ခန်းရှိရာကို လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ပြောသာပြောနေတယ် သိပ်မသေချာသေးပါဘူး။ စိတ်ထဲဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းဖြစ်နေပါသေးတယ်လေ။ ပြောသလိုမလုပ်ဖြစ်ရင် ယောက်ျားမပီသဘူးပြောမှာ စိုးရိမ်မိ တာလည်းပါရဲ့။ စည်သူ့ကြည့်ရတာကတော့ သူ့စိတ်ကူးနှင့် သူမြောနေပြီထင်ပါတယ်။ စည်သူ့ကို အိပ်ယာပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်ဖို့ ပြောလိုက်တာ သူကခြေထောက်တွေကို ခပ်ကားကားထားရင်း ကျွန်တော့်စကားကိုနားထောင်တယ်။ ကျွန်တော် သူ့ခြေထောက်ကား ကားတွေထဲ ဒူးထောက်လိုက်ရင်း ၀ိုင်းစက်ပြည့်ဖောင်းနေတဲ့ အစုံပေါ်လက်တင်လိုက်တာ အိစက်နုညံ့နေတာကြောင့် ရင်တွေ တော်တော် ခုန်လာတယ်။
အသာလေး ဘေးနှစ်ဖက်ကို ဆွဲဟကြည့်ပြန်တော့ ပန်းသွေးရောင် ခရေ၀လေးက စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပေါ်လာတယ်။ ကြည့်ရတာ အရသာ ရှိမယ့်ပုံပေါ်တာကြောင့် တင်ပါးတွေပေါ်မျက်နှာအပ် လျှာကိုထုတ်ကာ တို့ထိမြည်းစမ်းပါရော။ တို့လိုက် ကလိလိုက် မွှေကြည့်လိုက် ကျွန်တော် လုပ်တတ်သလို ကြိုးစားတာပေါ့နော်။ စည်သူ့ကြည့်ရတာ မျက်ဝန်းတွေကိုမှိတ်ကာ ငြိမ်သက်ပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် တွန့် တွန့်သွားကာ သာယာနေပါတယ်။
အချိန်နည်းနည်းကြာတဲ့အထိ ဆက်ပြီးပြုစုနေလိုက်တာ ခဏကြာတော့လဲ မှန်ရှိရာဘက်ကိုဖင်ပေးပြီး လေးဘက်ထောက်လိုက်ဖို့ စည်သူ့ကိုထပ်အကြံပေးလိုက်တယ်။ အလိုက်သင့်လေးနေပေးတော့လည်း သူ့ခရေ၀ကို ကျွန်တော့်လက်ခလယ်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိထည့်ကာချဲ့ပါရဲ့ မနာအောင်ပေါ့ လုပ်တဲ့အခါ။ ချောဆီလေးနည်းနည်းညှစ်ထည့်ပေးလိုက်ကာ လက်ချောင်းကိုအသွင်းအထုတ်လုပ် လိုက်ရင်း အဆင်ပြေလာတဲ့ခဏ တစ်ချောင်း၊ ဒုတိယ နောက်တစ်ချောင်း၊ ပြီးတော့ တတိယမြောက် နောက်လက်တစ်ချောင်း စုစုပေါင်း သုံးချောင်းလောက်ထည့်ကာ ချဲ့နိုင်သမျှ သူ့ခရေ၀ကို ကျွန်တော်ချဲ့ပါတယ်။ စည်သူ့ရွှေဥတွေ ပေါင်ရင်းကပ်သလို ခရေကြွက်သားတွေ ကလည်း ရှုံ့ပွရှုံ့ပွဖြစ်လာတာမြင်တော့ အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာ သိတာကြောင့် တရမ်းရမ်းနဲ့အစာတောင့်တနေသော ကျွန်တော့်ငပဲကို အဖော် (condom) စွပ်လိုက်ပါတယ် ချောဆီကိုအပေါ်က နည်းနည်းကဲလိုက်ပြီးတော့။ မာတောင့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို စည်သူ့ခရေ၀ ကို အသာတေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက် ပြန်ကြွလိုက်နဲ့ လမ်းချောအောင်ကြိုးစားရတယ်ဗျ။ ဟုတ်တယ် စည်သူ့ဖင်က သောက်ရမ်းကြပ်တာ။ အရင်စော်ကိုချတုန်းကနဲ့မတူ အတော်ကြိုးစားရတာပါပဲ။
'စိတ်ကိုလျော့ထား....လျော့ထားလေကွာ...အ' နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်နှုတ်ကဖွင့်ပြောလိုက်ရတယ်။ 'အသက်ကို ပါးစပ်ဟရှူ၊ စိတ် ကိုလျော့ထားပြီး ဖင်ကြွက်သားကို ညှစ်မထားနဲ့တော့။ ဒါမှ ငါတို့အဆင်ပြေမှာလေ' အဲလိုပြောလိုက်တော့မှ စည်သူနည်းနည်း သက် သောင့်သက်သာလျော့လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်တော် အလိုက်သင့် လျောကနဲ ဖိသွင်းလိုက်တယ်ငပဲကို။ စည်သူကျောကော့သွားတယ်။ နာကျင်မှုက လက်ချောင်းတွေကို ထည့်ကစားတုန်းကနဲ့မတူဘူးဆိုပဲ။ စည်သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်တွေလှိမ့်ပြီး မကျအောင် ထိန်းထိန်းနေသလားပဲဗျ။ ဘီရိုက မှန်ချပ်ထဲကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သူ့ခရေ၀ထဲမှာ နင့်နင့်နဲနဲကြီး ၀င်ထွက်နေ တာပါ..ဟီးဟီး။ အပြင်ကို ခဏဆွဲထုတ်လိုက် အသင့်ကြိုဆိုနေတဲ့ အခန်းဖော်ရဲ့ ခရေ၀ထဲ ဖိသွင်းလိုက်နဲ့ အဆင်ပြေလိုက်တာ။
နှစ်ယောက်သား ခဏငြိမ်လိုက်မိသေးတယ်။ စည်သူက အနေအထားပြောင်းချင်သေးတာကြောင့် ဇာတ်သိမ်းတော့မယ့် ကျွန်တော့်စိတ် ကိုသိမ်းကာ အသာထိန်းလိုက်ရရော။ စည်သူက ဘေးတစ်စောင်းလှဲချလိုက်တော့ ကျွန်တော်ကလည်း အလိုက်သင့် အနောက်ဘက်က နေရာယူလိုက်တယ်။ နည်းနည်းချောင်လည်လာတဲ့ စည်သူ့ခရေ၀ထဲကို အသာဖိသွင်းပြီး နေရာပြန်ယူလိုက်တော့ မှန်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ စည်သူ့မျက်နှာက ဒီအတွေ့အကြုံသစ်ကို သာယာနေပုံပါ။ ကျွန်တော်က အသာဆွဲထုတ်လိုက် ပြန်ဆောင့်သွင်းလိုက်ပေါ့ အထပ်ထပ် အခါခါ အရှိန်ကို တဖြည်းဖြည်းမြှင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လှုပ်ရှားမှုမှာ အိုကေလာတဲ့ စည်သူကလည်း ခပ်ပြင်းပြင်းကို သဘောကျပြီ ပေါ့နော်။
'အာ...ခပ်ပြင်းပြင်းလေးဆောင့်....အ...ထိတယ်...အာ'တဲ့ စည်သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားက ထွက်ပေါ်လာတာများ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်။ ကျွန်တော်လည်း အစွမ်းကုန်မာတောင့်နေတဲ့ ငပဲကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် ခပ်မြန်မြန် ကစားရုံသာမက တင်ပါးဖောင်းဖောင်းတွေ ကိုလည်း ရဲရဲနီလာအောင် ရိုက်ခတ်မိပါတယ် ကျွန်တော့်လက်တွေနဲ့ပေါ့။
ကျွန်တော် နည်းနည်းမောသွားတာကြောင့် အရှိန်ကို လျော့လိုက်ရင်း ငပဲကို စည်သူ့ခရေ၀ထဲက ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချွတ်ကာ အိပ်ယာပေါ် ပစ်လှဲလိုက်ပါရဲ့။ ငပဲထွားထွားကြီးကလေထဲကို ထောင်လို့ အားရစရာအခြေအနေ။
'အပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ပေးကွာ' စည်သူ ကျွန်တော်မောလျသံနှင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ စည်သူ ကျွန်တော့်ပေါ်ကို တက်ခွထိုင်ကာ သူ့ခရေ၀ကို ငပဲခေါင်းပေါ်တေ့ထိုင်ရင်းဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိချလိုက်ရောပေါ့နော်။ အဆုံးထိဖိချထိုင်ပြီးနောက် ခဏငြိမ်နေသေးတာမှာ မာ တောင့်နေတဲ့ သူ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကျွန်တော် ကလိပေးမိရပါတယ်။ ခဏနေတော့ ခပ်ဖြေးဖြေးခြင်း ဖင်ကို ကြွလိုက် ဖိလိုက် ကစားပါရဲ့။ မြန်သထက် ပိုမြန်လာတဲ့ခဏ စည်သူလှုပ်ရှားတာများ မြင်းကိုဒုန်းစိုင်းစီးနှင့်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ရုတ်တရက် ဘာမှန်းမသိ ကျွန်တော် ကြောက်စိတ်တစ်ခုဝင်လာသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငပဲကြီး သူ့ခရေ၀ထဲ ၀င်ထွက်နေတာကိုကြည့်ရင်း ပေါ့နော။ ဘယ်လိုစိတ်များပါလဲမေးရမလိုပါ။
စည်သူ သူ့တင်ပါးတွေကို ကြွလိုက် ဖိလိုက် မြင်းစီးနေတာ မကြာခင် နှစ်ဦးသား အထွဋ်အထိပ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။
'ခပ်ပြင်းပြင်းလေး....မြန်မြန်....အား....မြန်မြန်လေးဆောင့်' စည်သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းညူသံတွေမြန်လာတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ပင့်မြှောက် ဆောင့်ပြုချက်တွေ ကြောင့်လဲပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော် ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ပင့်ဆောင့်ကာ စည်သူ့ခရေ၀ထဲမြှုပ်နေတဲ့ condom ထဲကို ရွှေရည်တွေပန်းထည့်မိပါတယ်။ တုန့်ဆိုင်းသွားတဲ့ ကျွန်တော့်ဟန်ကိုကြည့်ရင်း စည်သူ သူ့ငပဲကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာခပ်သွက်သွက် ကစား တော့တာပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ပူနွေးသော၊ ပျစ်ချွဲသော အဖြူရောင်အရည်တွေဟာ စက္ကန့်မခြား ကျွန်တော့်ရင်အုပ်တွေ ဗိုက် ကြွက်သား တွေပေါ် ဖွေးကနဲဖြစ်ပေါတော့တယ်။
ကျွန်တော် ထထိုင်လိုက်ရင်း စည်သူ့ကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်လိုက်တယ်။ သူသည်လည်း ကျွန်တော့်ကို လိုလိုလားလားထွေးဖက်ပါရဲ့။ တမ်းတမက်မောဖွယ် အထွဋ်အထိပ်ခံစားမှုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာအမှန်ပေါ့ဗျာ။
ဟူး....အခုအချိန်မှာကျွန်တော်နှင့် စည်သူတို့ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားခံစားမှုဟာ နည်းနည်းတော့ ပြောင်းလဲသွား တယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကတော့ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး ကျွန်တော့်စော်နှင့် ဂျိမ်းတဲ့အခါ ခရေ၀ကို-ိုးဖို့ကြိုးစားချင်နေ တုန်းဆိုပါတော့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စော်တွေနှင့် အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ နှစ်ဦးသားအတွက် အထူးတလည်ကိစ္စတွေ ဖြစ်မနေတော့ဘဲ အခန်းတံခါးကိုပိတ် လော့ခ်ျလုပ်ကာ နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာတောင် နှောင်ဂျိမ်ချကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်းလေ ထမဦးဆုံးအချိန်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မမေ့လျော့ကြသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ ပိုက်ဆံအတွက် ကျွန်တော်တို့ ပိုကာ ဘယ်တော့မှ မကစားဖြစ်တော့ပါ။
Alex Aung (13 July 2012)
Posted by Min Lay at 7:17 AM